Chondroprotectors -ka ugu fiican eeyaha si loo xoojiyo kala -goysyada | Eeyaha Adduunka
Susana godoy | 15/10/2021 11:48 | Cudurada
Waxaan mar walba aad uga warqabnaa caafimaadka xoolaheena. Sidaa darteed, maanta waa inaan ka hadalnaa arrinta chondroprotectors eeyaha, sababta oo ah inkasta oo aan had iyo jeer aad loo siin daawooyinka, haddana ma jiro wax la tixgeliyo kaabisyada dabiiciga ah ee ugu badan si ay kaaga caawiyaan inaad dareento fiicnaan.
Sidaan si fiican u ognahay, waxaa jira cudurro aan laga hortagi karin, in kasta oo aan jeclaan lahayn, laakiin taasi waxay noqon kartaa mid caadi ah. Sidaas, Waa waqtigii la isku dayi lahaa in la yareeyo saamaynta iyaga waana halka ay ka soo bilaabanto chondroprotectors -ka eeyaha na khuseeya maanta. Ma rabtaa inaad ogaato wax walba oo iyaga ku saabsan?
1 Waa maxay chondroprotector
2 Miyuu u fiican yahay eeygu inuu qaato chondroprotectants haddii uusan qabin cudur wadajir ah?
3 Cudurrada ay chondroprotector -ka eeydu caawiso
4 Noocyada ugu fiican ee chondroprotectors eeyaha
5 Miyuu chondroprotectors ee eydu leeyihiin waxyeellooyin?
6 Sida loo siiyo chondroprotectors eygeyga
7 Miyuu chondroprotectors u shaqeeyaan eeyaha?
8 Meesha laga gato chondroprotectors -ka ugu jaban eeyaha
Waa maxay chondroprotector
Waxaan ka odhan karnaa iyaga inay yihiin kaabis dabiici ah ama kaabis cunto oo ujeedadeedu tahay hagaajinta fuuq -celinta iyadoo nafaqaynaysa carjawda. Sidaas oo kale kala -goysyada waa la abaal marin doonaa, way xoog badan yihiin oo waa la ilaalin doonaa, maadaama sidaan hore u sheegnay, ay noqon karto mid ka mid ah cudurrada ugu badan eeyaha badankooda.
Taasi waxay tidhi, waa in sidoo kale la xusuustaa inay yareyn karto ama xakameyn karto cudurrada sida osteoarthritis. Wax u horseedi kara curyaannimo, luminta dhaqdhaqaaqa ama qallafsanaanta oo ay tahay in la daweeyo ama laga hortago sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, sidaa darteed kaabisyada dabiiciga ah ayaa iyaduna muhiim u ah xaaladaha noocaan ah.
Miyuu u fiican yahay eeygu inuu qaato chondroprotectants haddii uusan qabin cudur wadajir ah?
Runtu waa haa. Sababtoo ah dhinac ayaan hore uga faalloonnay inay yihiin kaabisyo dabiici ah, sidaa darteed ma yeelan doonaan waxyeello xagga caafimaadka xayawaankayaga, laakiin waa ka soo horjeedda maxaa yeelay waxay ka caawin doonaan inay caafimaad qabaan. Way ka badan tahay, haddii aadan qabin cudur wadajir ah oo la aqoonsan yahay, had iyo jeer way fiican tahay inaad ka hortagto.
Haddii eeygaagu yahay jinsi weyn, waxay u badan yihiin inay yeeshaan dhibaatooyin wadajir ah oo badan, oo la mid ah haddii ay cayilan yihiin ama hore u yeesheen nooc dhaawac ah. Kiisaska noocan oo kale ah waxay yeelan karaan dhibaatooyin culus mustaqbalka sidaas darteedna, ka -hortaggu had iyo jeer wuu fiican yahay. Sidaa darteed, chondroprotectors eeyaha ma aha daaweyn ee waa kaabis.
Cudurrada ay chondroprotector -ka eeydu caawiso
Hip dysplasia: Marka eydu weynaato waxay la kulmi karaan dhibaato tan oo kale ah taasina waxay sababi kartaa xasilooni darro, iyo waliba xanuun.
Dhibaatooyinka jilibka: Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ah raaxo jilibka ama dhaawacyo seedaha.
Qalliinka ka dib: Waxa kale oo lagama maarmaan u ah soo kabasho degdeg ah, oo ay weheliso farsamooyin dhaqancelin, oo uu dhakhtarku soo jeedin doono.
Cudurka osteoarthritis: Marka ay kala -goysyadu dhammaadaan, xanuunku waa mid aad u daran oo dabadheeraad ah, markaa chondroprotector eeyaha ayaa yareyn kara astaamahan.
Arthritis: Waxa kale oo la xidhiidha barar ku dhaca kala -goysyada iyo kaabayaasha iyaduna ahmiyad aad u weyn leh.
Cudurka osteoarthritis: Hore ayaan u soo sheegnay waana cudurrada wadaagga ugu badan. Iyada oo kabitaankan dheeraadka ah lala dagaallamo.
Noocyada ugu fiican ee chondroprotectors eeyaha
In kasta oo laga yaabo inaan helno sumado kale oo dadka oo dhan si fiican u yaqaan, waa run in Cosequin uu sidoo kale meel ka samaynayo chondroprotectors -ka aadka loo dalbado eeyaha. Waxay u muuqataa inay leedahay ujeedo wanaagsan guud ahaan laakiin gaar ahaan eydaas oo aad u cayilan ama hore u lahaa da 'cayiman. Ka sokow ka hortagga xirmidda carjawda iyo dhibaatooyinka kale ee wadajirka ah.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la adeegsado maxaa yeelay waa run in sidoo kale ay tahay midda ugu aqoonsiga badan dhammaan. Xaaladdan mar walba waxaa loo isticmaali jiray in lagu daweeyo dhaawacyada. Xaaladaha qaarkood kaliya dhaawacyada oo ah nooc gaar ah laakiin kuwo kale oo badan oo noqda kuwo daba dheeraada. Waxay badanaa leeyihiin fikrado aad u wanaagsan marka ay timaaddo natiijooyinka. Waxaa intaa dheer inay ku jiraan fitamiin E.
Waxaan hore u aragnay inay aad u badan tahay eeyahayagu inay yeeshaan cudur ka mid ah lafaha oo haddii dhakhtarkaaga lagu kalsoon yahay kuu sheego in osteoarthritis ay noloshaada geli karto wakhti kasta, waxaad u baahan tahay kaabis sidan oo kale ah. Sababtoo ah halabuurkeedu waa kan ugu kala duwan tanina waxay kaa caawineysaa inaad ka hortagto ama hagaajiso saameynta cudurka.
Hyaloral 120 comp oo loogu talagalay ...
Kama tagi karno kan kale ee chondroprotector -ka eeyaha ku jira dhuumaha. Sababtoo ah kiiskan maahan kaliya fikradaha bixiya qodobbada togan laakiin sidoo kale waxaa jira daraasado muujinaya waxtarkiisa. Waxa intaa dheer in aan sidoo kale iftiiminno dhadhankiisa, kaas oo aad ugu raaxaysta xayawaankaaga.
Miyuu chondroprotectors ee eydu leeyihiin waxyeellooyin?
Si guud markaan u hadalno, waxaan dhihi karnaa maya. Chondroprotectors ee eeyaha badiyaa ma laha waxyeelo. Laakiin haa, had iyo jeer waa inaad xoogaa taxaddar muujisaa xaaladaha qaarkood. Iyada oo leh glucosamine ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay, waxay kordhin kartaa halista glaucoma. Haddii eeygaagu qabo sonkorow waa lagama maarmaan inaad la tashato dhakhtarkaaga xoolaha. Waxa kale oo lagama maarmaan ah inaad la tashato haddii aad xasaasiyad ku leedahay cunto kasta, maxaa yeelay tani waxay la falgeli kartaa mid kasta oo ka mid ah qaybaha dheeraadka ah ee su'aasha ku jira. Xaaladaha qaarkood, laakiin aad u gaar ah, shuban ama matag ayaa lagu tilmaamay laakiin ma aha kuwo joogto ah.
Sida loo siiyo chondroprotectors eygeyga
Runtu waxay tahay in ku imaanshaha qaabka kiniinka, waxay noqon kartaa xoogaa raaxo leh, xaaladaha qaarkood. Sababtoo ah eeyaha oo dhami ma aha saaxiibo daawada qaata. Qaar ka mid ah kaabayaashan ayaa mar hore dhadhamiyay si aad ugu raaxaysato. Laakiin waa run inuuama ka fiican ayaa ah in cuntada lagu dhex daro.
Summad kasta oo gaar ah ayaa keeni doonta tallaabooyinkeeda si ay awood ugu yeelato inay siiso xayawaankaaga chondroprotector. Laakiin guud ahaan taas ayaan kuu sheegi karnaa caddadkeedu wuxuu ku xirnaan doonaa miisaanka ee xayawaankaaga. Sababtan awgeed, eeyaha culeyskoodu u dhexeeyo 5 ilaa 10 kiilo ayaa qaadan kara wax ka yar nus kiniin ah maalin kasta. Haddii aad hesho 10 kiilo markaa haa waan sii wadi karnaa inaan siinno kiniin maalin kasta. Laakiin sidaan nidhaahno, si aan u hubno, waxba ma aha sida akhrinta buug -yaraha ama la -talinta dhakhtarka xoolaha.
Miyuu chondroprotectors u shaqeeyaan eeyaha?
Maskaxda ku hay in aysan ahayn daaweyn lafteeda, laakiin ay tahay kaabis ilaalin karta oo daryeeli karta dhibaatooyinka mustaqbalka ee xayawaankayaga. Markaa, anigoo ku kalsoon, markii aan bilaabay inaan siiyo eeyga chondroprotectants sababtoo ah cayil xad dhaaf ah iyo dhibaatooyin wadareed ayaan arkay inaan runtii shaqeeyay. Waa run in aysan ahayn wax mucjiso ah maalin maalmaha ka dambeeya, laakiin waxaad aragtaa natiijooyin. Xaaladda miisaanka xad -dhaafka ah, tilmaamaha kale waa in sidoo kale la raaco si loo hagaajiyo xaaladdan, laakiin chondroprotector -ku wuxuu gacan ka geystaa hagaajinta awooddooda ama xaddidnaanta jir ahaaneed ee ay helaan sababtuna tahay waqtiga ama dhibaatooyinka caafimaad. Xayawaankayga dhexdiisa waxaa ka dhacay isbeddel, isagoo ka tagay dhibaatooyin dhaqdhaqaaq oo gaar ah iyo inuu yeeshay niyadda wanaagsan.
Meesha laga gato chondroprotectors -ka ugu jaban eeyaha
Amazon: In kasta oo ay tahay heerka ugu weyn ee dukaamaysiga, haddana waa in la xusaa inaan heli karno magacyo kala duwan, kuwa ugu caansan iyo kuwa leh qiimeynta ugu fiican. Tani waxay ka dhigaysaa doorashadaada mar walba mid sax ah iyo waliba, leh qiimaha ugu tartan badan suuqa. Maadaama noocyadan dheeraadka ah aan lagu aqoon inay yihiin kuwo runtii raqiis ah.
Kiwoko: Waa mid ka mid ah dukaamada xayawaanku si heer sare ah oo sidaas oo kale ah, waxay sidoo kale leeyihiin chondroprotectors eeyaha. Waxay leeyihiin dhowr nooc iyo dabcan, oo leh qiimayaal kala duwan mid walba, markaa waxaad dooran kartaa iyadoo ku saleysan baahiyahaaga. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee aan u leenahay inaan awoodno inaan ilaalino kuwa dhogorta leh.
Kimipharma: Sidoo kale kaabisyada xayawaanku waxay yimaadaan Kimipharma marka lagu daro, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato qiimo aad u jaban, taas oo kuu oggolaan doonta inaad siiso xayawaankaaga ugu fiican adigoon lacag badan ku bixin. Iyada oo xaruntiisu tahay Portugal, waa mid kale oo ka mid ah dukaammada aadka loo bogaadiyay sannadihii la soo dhaafay, iyada oo ay ugu wacan tahay hagaajinta tayada nolosha.
Tendenimal: Tianimal -ka waxaad ka heli doontaa kaabisyo laga bilaabo qiimayaal aad u jaban ilaa wixii aan niyadda ku haynay. Noocyo kala duwan leh qaabka kiniinka si aad ugu siiso hab raaxo leh xayawaankaaga. Intaa waxaa dheer, iyada oo wadarta amniga iyo kalsoonida dukaan sidan oo kale ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Cudurada » Chondroprotectors eeyaha
Koonsyada ugu fiican ee eeyaha iyo beddelkooda